Isbarbardhiga bilawga barnaamijka CAD / GIS - Geofumadas
Febraayo, 2010 ArcGIS-ESRI, AutoCAD-AutoDesk, Google Earth / Maps, GvSIG, GIS kala cayncayn ah, Microstation-Bentley, qgis
Tani waa jimicsi shuruudo isku mid ah, si loo qiyaaso waqtiga ay qaadato si aad u bilawdo barnaamijka gujinta astaanta astaanta ilaa illaa waqtiga uu socdo.
Ujeeddooyin isbarbardhig ah, waxaan u adeegsaday midka bilaabanaaya waqtiga ugu gaaban, ka dibna (wareegsan) tilmaam xilliyada la xiriira. Looma jeedin in la soo gabagabeeyo, maxaa yeelay mashiinkeyga saboolka ah waxaa aad ugu raran barnaamijyo, laakiin haa, dhammaantood waxaa lagu qiyaasaa duruufo isku mid ah.
Windows XP Professional, Intel Core 2 Duo, oo leh 2.19 Ghz iyo 1 GB oo RAM ah.
Waa hubaal inay jiraan tafaasiil gaar ah oo qiil ka dhigi doonta dib u dhaca qaar, laakiin waxaan u daynayaa ikhtiyaarkaaga xorta ah. Waxaa laga reebay ArcGIS iyo TatukGIS oo aan jeclaan lahaa in lagu daro, laakiin aan lagu rakibin.
Waqtiga si aad u furto
Manifold GIS 7x Saacadaha 8 1
Arc View 3.3 Saacadaha 10 Waqtiyada 1.25
Microstation V8.5 Saacadaha 12 Waqtiyada 1.5
Microstation Geographics V8.5 Saacadaha 18 Waqtiyada 2
Microstation V8i Saacadaha 26 Waqtiyada 3
Google Earth 5.1 Saacadaha 37 Waqtiyada 5
GIS Quantum Saacadaha 43 Waqtiyada 5
AutoCAD 2009 Saacadaha 44 Waqtiyada 5
Bentley Map V8i Saacadaha 66 Waqtiyada 8
gvSIG 1.9 Saacadaha 72 Waqtiyada 9
AutoDesk 3D 2008 Saacadaha 84 Waqtiyada 10
Post Previous" Hore Google wuxuu ku socdaa Facebook iyo Twitter
Post Next Gabadha la socota shukulaatadaNext »